‘कान्छा सीइओ’ विवेक झाको सफलता : लकडाउनमा पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यापार ‘आक्रामक’ ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
‘कान्छा सीइओ’ विवेक झाको सफलता : लकडाउनमा पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यापार ‘आक्रामक’ !
२३ बैशाख २०७७, मंगलवार १६:४९
चालु वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म १८ अर्ब ६७ करोड कुल बीमा शुल्क संकलन
बिमा क्षेत्रमा अलगै नाम मानिने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लकडाउनमा पनि आक्रामक व्यापार गरेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीको सर्बोकृष्ट कम्पनीका रुपमा चिनिदै आएको लकडाउनमा पनि आक्रामक व्यापार गरेको हो ।
‘लकडाउनमा कुनै पनि दिन हाम्रो काम रोकिएन, डिजीटल माध्यमको भरपूर्र प्रयोग गरेर काम भयो,’कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) विवेक झाले नागरिक टाइम्सलाई बताए ।
यसैको परिणाम स्वरुप नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म १८ अर्ब ६७ करोड कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीले १५ अर्ब ३६ करोड कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
त्यस्तै खुद बीमा शुल्क आर्जन २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १८ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । कम्पनीले कम्पनीले यस अवधिमा ४ अर्ब ७६ करोड कुल दावी भुक्तानी गरेको छ भने भुक्तानी हुन् बाँकी रकम ७२ करोड ४४ लाख छ ।
तेश्रो त्रैमाससम्म खुद मुनाफा ४६ करोड ७५ लाख पुगेको छ । कम्पनीको प्रकाशित प्रति शेयर आम्दानी ११ रुपैया ३४ पैसा छ भने किताबी मूल्य १५८ रुपैया ३६ पैसा छ ।
५ अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब ७३ करोड छ भने जीवन बीमा कोष ८१ अर्ब ३७ करोड पुगाउन सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा जीवन बीमा कोष ६० अर्ब ६२ करोड थियो ।
यस्तो छ ‘कान्छा सीइओ’ विवेक झाको संघर्ष यात्रा :
आखिर के चीज रहेछ, सबैले मान्ने र पुज्ने ? मेरो बालमस्तिष्कले केही भेउ पाएको थिएन । रुपैठागाउँमा असाध्यै चोरी हुन्थ्यो । दक्षिणबाट आएका डाँकाले गाउँबस्ती सखापै हुने गरी लुटपाट गर्थे । त्यसबाट जोगिन सात-आठजना स्वयम्सेवक अघिपछि लगाएर हिँड्ने हजुर बा एकातिर, अर्कोतिर संयुक्त परिवारको व्यवस्थापन गर्ने अजुरआमाको कला के हो ? मेरो कलिलो मनले धेरै भेउ पाएको थिएन ।
नजीकै पाठशाला थियो । हालको जनकपुर कलेज नजीकै । राजनीतिका कुरा पनि हुन्थे, समाज सुधारको चर्चा पनि चल्यो । विवेकका हजुरबा त्यसका साक्षी हुनुहुन्थ्यो । पढे-लेखेको नभए पनि व्यवस्थापनको कुरा मैले उहाँबाटै सिकेको हो । कुनै समय कान्छा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको परिचय बनाएका विवेक विगतमा फर्कनुहुन्छ र त्यसलाई वर्तमानसँग जोड्नुहुन्छ ।
हरेक कम्पनीका आफ्नै काम गर्ने शैली र रणनीति हुन्छ । जीवन बीमाको नाम लिने बित्तिकै सबैको मुखमा नाम आइहाल्छ, नेपाल लाइफ । नेपालका बीमा कम्पनी बलिया छैनन्, यिनीहरुले भुक्तानी दिँदैनन्, एकाध वर्ष चलाउँछन् र भाग्छन् भन्ने बजारमा मनोविज्ञान थियो । धेरैले क्षणिक लाभ-हानिको मात्रै हिसाबकिताब गरेर बसेका थिए । बीमाबारे बुझेका भनिएकाहरु पनि सीमापारि जान्थे बीमा गर्न तर आज अवस्था फेरिएको छ । रु २० करोड सञ्चालकको लगानी र रु पाँच करोड नागरिकको लगानीबाट शुरु भएको नेपाल लाइफले बीमा क्षेत्रको इतिहास नै बदलिदिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०७७, मंगलवार १६:४९
नेपाली कामदारलाई शुक्रबार एयर अरेबियामार्फत नेपाल पठाउने यूएईको प्रस्ताव
एयर अरेबियामार्फत् संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले नेपाली कामदारलाई शुक्रबार पठाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर,
लकडाउन घोषणा भएको ७२ औं दिनमा व्यवसायीहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा लकडाउनको उलङ्घन गर्ने भएका छन् ।
जर्मन एयरलाइन्स कम्पनी लुफ्थान्साले पहिलो चौमासिक अवधिमा दुई अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर ९२.१ अर्ब
सरकारको तत्काल कर बुझाउने जारी सुचना प्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ महामारीको कारण देश लकडाउनमा भैरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार आन्तरिक